IFedora 34 isivele ikhishiwe, yazi ukuthi yini okusha | Kusuka kuLinux
Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa zokukhula nangezinguquko ezahlukahlukene ezamenyezelwa unyaka wonke odlule futhi ezinye zazo esabelana ngazo lapha kubhulogi, Inguqulo ezinzile yeFedora 34 isivele ikhishiwe futhi isilungele ukulanda.
Le nguqulo entsha yeFedora 34 kufaka phakathi ukuthuthuka okuphawulekayo okufanele ukubhekelwe, ngoba izinguquko eziningi zihlobene nokwenza ngcono ukusebenza futhi ikakhulukazi eziqondiswe kwi-Hardware.
1 Izici Ezintsha Eziyinhloko ze-Fedora 34
2 Landa i-Fedora 34
Izici Ezintsha Eziyinhloko ze-Fedora 34
Kule nguqulo entsha singathola ukuthi yiniyonke imifudlana yomsindo idluliselwe kuseva yemidiya yePipeWire, manje osekuzenzakalelayo esikhundleni sePulseAudio neJACK futhi ngukuthi ngaphezu kweqiniso lokuthi iPipeWire iphakeme ezintweni eziningi, ukusetshenziswa kweWayland nakho kuyabhekelwa, ngaphezu kwalokho ukuhlanganiswa nedeskithophu ye-KDE kuyiswe sebenzisa i-Wayland kusuka ngokuzenzakalela, iseshini esekwe ku-X11 inyuswa ibe inketho.
Futhi kunjalo ukhuluma nge-wayland, UFedora ube yisilinganiso futhi I-Fedora 34 ifaka ukusekelwa okuthuthukisiwe kweWayland, njengoba amandla wokusebenzisa ingxenye yeXWayland engezwa kumasistimu anezishayeli zeNVIDIA eziphathelene.
Ezindaweni eziseWayland, ukwesekwa okungenamakhanda kwemisebenzi kusebenza, ekuvumela ukuthi usebenzise izinto zedeskithophu kumasistimu akude wokufinyelela ngokufinyelela nge-VNC noma i-RDP.
Ingxenye yeXwayland DDX idluliselwe kuphakeji elihlukile elenziwe lisuselwa kukhodi entsha engancikile ezinhlotsheni ezizinzile ze-X.Org Server.
Olunye ushintsho olubalulekile ukuthi i-Fedora 34 ivuselelwe ku Uhlobo lwe-GNOME 40 kanye nomtapo wezincwadi we-GTK 4. Ku-GNOME 40, ama-desktops angokoqobo ku-Activities Overview ahlelwe kumumo we-landscape futhi avele njenge-loop eqhubekayo ukusuka kwesobunxele kuye kwesokudla.
Ideskithophu ngayinye ekhonjiswe kwimodi yokubuka konke ikhombisa ngokusobala amawindi atholakalayo, aqoshwe ngamandla futhi akalwa ngokuhlangana komsebenzisi, futhi kunikezwa ushintsho olungenamthungo phakathi kohlu lohlelo nama-desktops abonakalayo.
Ngakolunye uhlangothi, ngendlela ejwayelekilel lonke uhlelo lweFedora lususiwe ukuthi lusebenzise inqubo ye-systemd-oomd ngempendulo yokuqala kwimemori yohlelo oluphansi esikhundleni senqubo yokuqala.
Singakuthola futhi lokho uhlelo lwefayela le-Btrfs, obekuzenzakalelayo kuzinguqulo zedeskithophu I-Fedora (iFedora Workstation, iFedora KDE, njll.) Kusukela enguqulweni yokugcina, ifaka ukucindezelwa kwedatha okusobala kusetshenziswa i-algorithm yeZSTD. Ukuminyaniswa kungokwakhona kokufakwa okusha kweFedora 34.
Kumagazini we-IoT, ukusekelwa kwe- amapuleti I-ARM Pine64, i-RockPro64 noJetson Xavier NX, nokusekelwa okuthuthukisiwe kwamabhodi asekelwe i.MX8 SoC anjengeThor96 96boards kanye ne-Solid Run HummingBoard-M. Kunikezwe ukusetshenziswa kwezinqubo zokubuka zehardware zokuthola kabusha kohlelo okuzenzakalelayo.
Injini yefonti yeFreeType isuswe ukuthi isebenzise injini yokumodela yeHarfBuzz. Ukusebenzisa i-HarfBuzz ku-FreeType kuthuthukise ikhwalithi yeziphakamiso.
Kukhishwe ikhono lokukhubaza i-SELinux ngesikhathi sokusebenza; Ukukhubaza ngokushintsha izilungiselelo akusasekelwa. Ngemuva kokuqaliswa kwe-SELinux, abashayeli be-LSM manje sebafundwa kuphela, bathuthukisa ukuvikelwa ekuhlaselweni okuhlose ukukhubaza i-SELinux ngemuva kokusebenzisa ubungozi obungahle buguqule okuqukethwe yinkumbulo ye-kernel.
Futhi, ukuqala kabusha kwazo zonke izinsizakalo zohlelo kwanikezwad ivuselelwe ngasikhathi sinye ngemuva kokuqedela okwenziwe kumphathi wephakeji le-RPM. Uma phambilini insiza iqalwe phansi ngokushesha ngemuva kokubuyekeza iphakethe ngalinye eliyiwelayo, umugqa manje usuyakhiwa futhi izinsizakalo ziqaliswa kabusha ekupheleni kweseshini ye-RPM, ngemuva kokuthi wonke amaphakheji nemitapo yolwazi ibuyekeziwe.
Landa i-Fedora 34
Ekugcineni, kubo bonke abafuna ukuthola lesi sithombe esisha sohlelo bese befaka ukusatshalaliswa kweLinux kumakhompyutha abo noma bamane bafuna ukuhlola uhlelo ngaphansi komshini obonakalayo.
Kufanele nje uye Iwebhusayithi esemthethweni wokusabalalisa kanye nasengxenyeni yalo yokulanda ungathola isithombe sohlelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » IFedora 34 isivele ikhishiwe, yazi okusha
IGCC 11.1 isivele ikhishiwe, lezi yizindaba zayo nezinguquko ezibaluleke kakhulu